सौन्दर्य खुराक « Lokpath
२०७६, १६ पुष बुधबार १५:४०
तस्वीरमा आकर्षक देखिन यस्तो ‘ट्रिक’ अपनाउँछन् सेलिब्रेटी, तपाई पनि सिक्ने कि ?
हामी अक्सर हिरोइनका तस्वीर हेरेर लालायित हुन्छौं । उनीहरु जस्तै कपडा लगाएर, मेकअप गरेर आफूलाई पनि आकर्षक देखाउने प्रयास गर्छौं । तर, हिरोइनका तस्वीर सुन्दर देखिनुका पछाडि उनीहरुको लवाइखवाइ र
नाइट क्रिमको प्रयोगले छालामा हुने फाइदा, यसले कसरी काम गर्छ त ?
तपाईं सुत्ने क्रममा नाइट क्रिम लगाउँदा तपाईंको छालामा चमत्कारिक फाइदा पुर्याउँदछ । सबैका लागि शरीरको महत्वपूर्ण अंग भनेको छाला हो र यो सौन्दर्य प्रदान गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ ।
‘मिसेस युनिभर्स २०१९’मा बिनु लामिछानेले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने
काठमाडौं । ‘टुडेज उमन मिसेस नेपाल युके’ को ४७ औं मिसेस युनिभर्स २०१९’ मा नेपालबाट बिनु लामिछानेले भाग लिने भएकी छिन्। आगामी २२ देखि ३० डिसेम्बरसम्म चीनको गन्जाओमा आयोजना हुने
जाडोयाममा छालाको हेरचाह : सुख्खा हुनबाट कसरी बचाउने ? टिप्ससहित
काठमाडौं । जाडोयाम सुरु भएको छ । यससँगै तपाईले आफ्नो छाला निकै राम्रो हेरचाह गर्नुपर्छ । किनकी छाला सुख्खा हुनु यो सिजनको प्रमुख समस्या हो । छालाले व्यक्तिको उमेर बताईदिने
काठमाडौं । ओंठले व्यक्तिको सुन्दरता झल्काउँछ । कोमल ओंठले मानिसलाई सुन्दर देखाउछ । तर बढ्दै गएको चिसो र धुलोधुँवायुक्त वातावरणका कारण धेरै मानिसहरुमा ओंठ फूट्ने, सुख्खा हुने जस्ता समस्या देखिन्छ
कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय काठमाडौं । कपालले मानिसहरुलाई सुन्दर र आकर्षण देखाउँछ र सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ । कसैलाई मन नपर्ला र ? सर्लक्क परेको
स्वास्थ्यदेखि सौन्दर्यसम्म उत्तिकै लाभदायक, यस्ता छन् महका १६ फाइदा
काठमाडौं । महले मानव स्वास्थ्यको धेरै कुरामा फाइदा पुर्याउँछ । महले स्वास्थ्यदेखि सौन्दर्यसम्म उतिकै फाइदा पुर्याउछ । महमा काब्रोहाइड्रेड, भिटामिन बी र सी, आइन म्याग्नेसियम, क्याल्सियमदेखि लिएर पोटासियम फोस्फोरस सोडिय
तुलसीको अत्यधिक सेवनले तपाईंको रगत पातलो हुनसक्छ
हामी सबैले तुलसीको फाइदाको बारेमा त सुन्दै आएका छौँ ।तर यसो भन्दैमा तुलसी शत प्रतिशत साइड इफेक्टरहित भने होइन । यस्तैमा तुलसीको पनि केहि नकारात्मक पक्षहरुको बारेमा हामी तपाईंलाई जानकारी
जाडोमा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ? जानी राखौँ
काठमाडौं । मौसम परिवर्तन भईरहन्छ । मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न परिवर्तन देखा पर्दछ । अहिले जाडो सुरु भएको छ । जाडो महिनाको समय हाम्रा हात, खुट्टा, गाला, ओठ
यस्तो देखिन्छन् मेकअप बिना सेलिब्रेटिहरु
एजेन्सी । सेलिब्रेटिको सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी इन्स्टाग्राम अथवा ट्वीटर अकाउन्ट हेर्दा लाग्छ उनीहरुको सुन्दरताले हामिलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिन्छ । यस्तै कुनै म्यागेजिन हेर्ने हो भनेपनि त्यसमा पनि सेलिब्रेटिकै तस्विरले मोहित पारिदिन्छ
क्याबिनेटसँग शपथ लिने तयारीमा बाइडेन, ट्रम्प भन्छन् अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ